Ikhandlela Elinamakha, Isiphathi Samakhandlela, I-Wax Yamakhandlela - Winby
Ukunezela ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kuyisiqinisekiso salokho
ubudlelwane bethu obuhlala isikhathi eside bokusebenzisana.
Ikhandlela leWinby linefektri yalo yokukhiqiza lonke uhlobo lwamakhandlela anamakha. Sinezinto ezicebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela iminyaka ecishe ibe ngu-20. Futhi sineqembu lobuchwepheshe lokunikeza insizakalo enhle namakhandlela kumakhasimende ethu avela emhlabeni wonke.
Sinokuhlangenwe nakho okuhle kwebhizinisi emikhiqizweni elandelayo: Amakhandlela engilazi anephunga elimnandi, Izibani zetiye, amakhandlela ensika, amakhandlela e-Votive, amakhandlela, imicu nezinye izinto zokusetshenziswa zamakhandlela.
Sine design yethu siqu futhi ukuthuthukisa umnyango, futhi singakwazi ukunikeza OEM kanye ODM service for amakhasimende.
Ama-batik wamakhandlela azinzile kakhulu futhi anemvelo.
Amaphunga athandwa kakhulu nemibala emihle iyatholakala.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo nensizakalo kungumphefumulo webhizinisi
ukusiza amaklayenti ukonga isabelomali nesikhathi.
Sinefektri yethu yokukhiqiza amakhandlela anamakha.Kunezitayela ezingamakhulu zamakhandlela anamakha.
Okokusebenza okuluhlaza, sisebenzisa i-parafini wax, i-soy wax, i-bex kanye nenye i-wax yezitshalo yamakhandlela ethu.
Ngephunga elimnandi sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 zephunga elikhethiwe lamakhandlela anamakha.
Promotional Custom Luxury Soy Wax Iphunga Candl ...
I-chakra yokuhlobisa enamakha amakhandlela e-soy ayakhala ...
Amakhandlela Esipho Esinephunga Elimnandi anemvelo ...
Art ikhandlela GY01 ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Candle ikhandlela
2018 New Style Iphunga Amafutha ikhandlela
matte frosted ngokwezifiso Glass mhlanga diffuser ikhandlela ...
Ikhaya Ukuhlobisa Yemvelo olunephunga elimnandi soy Wax Cube Me ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Matte Frosted Glass ikhandlela jar ...
Hlala ubukele izibuyekezo
07 / Febhuwari
Ngemuva kwesikhathi eside sentuthuko embonini yamakhandlela, thina ikhandlela likaWinby liqongelele amakhasimende amaningi futhi lathola ukunconywa okuphezulu okuvela emazweni amaningi. Lokhu okulandelayo ...
20 / Febhuwari
Sibe nomhlangano wethu waminyaka yonke ngesonto eledlule, bekuyisikhathi esimnandi, sonke esisakwazi ukusikhumbula. Ibhodi langemuva elenzelwe ngokukhethekile umhlangano waminyaka yonke. Njalo ...
Inkampani yamakhandlela kaWinby iyinkampani esezingeni eliphakeme yokukhiqiza amakhandlela anamakha, izimbiza zamakhandlela, ikhandlela lensika nekhandlela lobuciko. Siye iqhaza Canton Fair iminyaka eminingi ...